Nepalistudio » किन राखिन्छ मन्दिरका टुडालहरुमा नग्न आकृति ? के छ राख्नुकाे रहस्य ? जान्नुहाेस् किन राखिन्छ मन्दिरका टुडालहरुमा नग्न आकृति ? के छ राख्नुकाे रहस्य ? जान्नुहाेस् – Nepalistudio
किन राखिन्छ मन्दिरका टुडालहरुमा नग्न आकृति ? के छ राख्नुकाे रहस्य ? जान्नुहाेस्
तपाई मन्दिरतिर जाँदा माथि तिर आँखा लगाउनु भएको छ ? लगाउनुभएको छ भने नेपाली शैलीका मन्दिरमा गारोको भागबाट ४५ डिग्रीको कोणमा छाना अड्याउन एक विशेष काठको प्रयोग नदेख्ने कुरै भएन । त्यसैलाई टुडाल भनिन्छ ।
तर, टुडालमा जे देख्नुहुन्छ त्यसले भने तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । खासमा टुडालको एकमात्र उद्देश्य छानो दरिलो बनाउने हो तर त्यसमा राखिएका यौन दृश्य भने सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । प्याकोण वा प्यागोडा शैलीमा बनाईने मन्दिरका छानामा बढी माटाका टायलहरुको प्रयोग हुनेहुँदा बर्खा याममा पानीले पर्खालहरु गल्ने र भत्किने डरले प्रयोग गरिने दरिला काठमा यौनका कलाकर्म देखाउने कुनो कसरी बन्न थाल्यो ? यो सबैको चासोको विषय हो ।
सुरुमा टुडालमा शरीरका विभिन्न मोडका मात्रै आर्कषक कलाहरु बनाइन्थ्यो । हिन्दु धर्ममा यसरी तले मन्दिरका टुंडालमा कला कुद्ने काम भने बौद्ध धर्मबाट आएको मानिन्छ ।
पहिले–पहिले वनदेवीले भिक्षुुहरुको रक्षा गरेको र पछि हिन्दु संस्कृतिमा वनदेवीलाई कालाभाञ्जिकाकै स्वरुप मानियो । कालाभाञ्जिकाले आफ्ना मान्छेलाई रुखका हाँगामा बसेर सुरक्षा दिन्छिन् भन्ने विश्वास भएका कारण मन्दिरको माथिल्लो भागमा ४५ डिग्री बनाएर रुखकै हाँगामा झुण्डिएजसरी मूर्ति कुद्न थालियो ।
त्यतिबेलासम्म मन्दिरमा यसरी यौनक्रिडाका विभिन्न आसनहरु सहितका कला देख्न पाइदैनथ्यो । तर, १३ औं शताब्दीमा पनौतीमा निर्माण भएको इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको टुडालमा भने कामुक कलाको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
अनि काठमा, माटोमा, धातुमा जे–जेमा हुन्छ यौनबद्धक आकृतिहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्नु भन्ने आदेश भएछ । त्यसपछि कलाकारहरुले आ–आफ्ना कलालाई यौनसौन्दर्यतिर मोडेछन । त्यसैबेलादेखि सार्वजनिक स्थलहरुमा, मठमन्दिरहरुमा, जहाँ–जहाँ मानिसको विशेष उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ यस्ता यौन आकृति स्थापना गर्न थालिएको जनविश्वास छ ।